Golf Balls, Range Golf Balls, Tour Golf Balls - Vensen
2 PC Range Mabhawa
2-PC Mabhiza Ekutangisa
3-PC Vanoona Mabhora (Ionmoer)
3-PC Vanoona Mabhora (Urethane)
VENSEN GOLF iri boka monopolizes kugadzira, magadzirirwo, budiriro uye rokutengesa yamarudzi ose gorofu balls. The fekitari ndokwenguva nzvimbo 5, 000 mativi mamita. The kambani iri muna Jiangsu Province, China, pamwe yakakunakira zvifambiso uye zvakanaka nenzvimbo ezvinhu.
The kambani inoshandisa vatorwa imupota zvokushandisa, marezinesi mbishi zvinhu, uye ane batch mangé unyanzvi ruzivo nyanzvi zvekushandisa vashandi, kuitira kuti mumwe nomumwe gorofu bhora kubva fekitari ane hwakavimbika uye high quality.
Mazano evanotanga kudzidzira zvemukati gorofu
Kuvimba NeChina Uye Hapana Chekutya
Get nhau akanunura daily!
Tipei wako email iwe kuti zuva nezuva achiudza pamwe ichangobva kuitika, zvizere!